चीनले हङकङ कसरी पायो ? यस्तो छ इतिहास - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
/ Fri, April 27, 2018
चीनले हङकङ कसरी पायो ? यस्तो छ इतिहास
असार २४ गते, २०७४ - ११:४९
काठमाडौं, २४ असार । ब्रिटेनले हङकङको शासन चीनलाई हस्तान्तरण गरेको गत शनिबार २० वर्ष पुगेको छ । त्यस विषयमा तपाईँले थाहा पाउनैपर्ने कुराहरु निम्न बमोजिम छन् ।
किन हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरियो ?
सन् १८४२ मा पहिलो अफिम युद्धमा चीनलाई पराजित गरेपछि ब्रिटेनले सन् १८४२ मा पहिलो पटक हङकङ टापु आफ्नो नियन्त्रणमा लियो ।
दोस्रो अफिम युद्धपछि सन् १८६० मा बेइजिङ कोवलुनबाट समेत पछि हट्न बाध्य भयो । उक्त भू–भाग हङकङ टापुको विपरीतमा रहेको मूलभूमिमा थियो ।
सो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउन सन् १८९८ मा ब्रिटेनले न्यु टेरिटोरिज भनिने थप भूमि भाडामा लिने निर्णय गर्यो र ९९ वर्षपछि त्यो चीनलाई फिर्ता दिने वाचा गर्यो ।
ब्रिटेनको शासन अन्तर्गत हङकङमा तीव्र विकास भयो र यो विश्वको एउटा प्रमुख आर्थिक र व्यापारिक केन्द्र बन्यो । र, सन् १९८२ मा लण्डन र बेइजिङले उक्त भू-भाग चीनलाई फिर्ता गर्नेबारे कठिन वार्ता प्रकिया शुरु गरे ।
त्यसबेलासम्ममा सन् १९४९ देखि तानाशाही एक दलीय कम्युनिष्ट शासन प्रणाली रहेको चीनको मुख्य भूमि भन्दा हङकङको राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली व्यापक फरक ढंगले विकास भइसेकेको थियो ।
हङकङको भविष्यबारे के सहमति भएको थियो ?
चीनले हङकङ एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तअन्तर्गत शासन गर्न सहमति जनाएको थियो ।
सोअवधारणा अन्तर्गत उक्त शहरलाई विदेश तथा रक्षा मामिला बाहेकका विषयमा अर्को ५० वर्षसम्म बढी स्वायत्ता दिने भनिएको थियो ।
हङकङलाई विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाइएको थियो । त्यसको अर्थः
त्यहाँको आफ्नै कानून प्रणाली रहने
त्यहाँ एकभन्दा धेरै दलहरु रहने
र, त्यहाँ भेला हुन पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
यी विशेष अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न उक्त भू–भागको आफ्नो अलग्गै मिनी संविधान छ ।
आधारभूत कानून अर्थात् बेसिक लु भनिने उक्त कानूनले हङकङको प्रमुख कार्यकारी विश्वव्यापी मतदानको अधिकार र लोकतान्त्रिक विधिबाट चुन्ने अन्तिम उद्देश्य बोकेको छ ।
हङकङकी पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले गत शनिबार राष्ट्रपति सी जीनपिङसमक्ष सपथग्रहण गरेकी छन् ।
हङकङमा कसरी शासन गरिएको छ ?
हङकङको नेतालाई प्रमुख कार्यकारी भनिन्छ, जसलाई १,२०० सदस्य रहेको एउटा निर्वाचन समितिले चुन्ने गर्छ ।
उक्त समितिमा रहेका बहुमत सदस्यलाई बेइजिङ समर्थक ठान्ने गरिन्छ । त्यहाँको संसद्लाई लेजिस्लेटिभ काउन्सिल अर्थात् विधायिका परिषद् पनि भन्ने गरिन्छ ।
त्यसमा आधा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गर्छन् र आधा प्रतिनिधि पेशागत वा विशेष स्वार्थ समूहहरुले चुन्ने गर्छन् । राजनीतिक अभियानकर्ताहरुले उक्त चुनावी प्रकियाले बेइजिङलाई आफूलाई मन नपर्ने उम्मेदवारलाई बाहिरै राख्न सघाउ पुर्याइरहेको बताउने गरेका छन् ।
हङकङमा किन प्रदर्शन भइरहेका छन् ?
हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर अभियानकर्ताहरुले त्यहाँका मानिसहरुलाई आफ्ना नेता प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरेको वर्षौं भइसकेको छ ।
सन् २०१४ मा बेइजिङले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रमुख कार्यकारी चुन्न दिने बतायो तर शुरुमा नै अनुमोदित भइसकेका सूचीबाट उम्मेदवारहरु छानिनुपर्ने शर्त राख्यो ।
यसले गर्दा त्यहाँ पूर्ण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको माग गर्दै ठूला–ठूला प्रदर्शनहरु भए जसका कारण शहरको मध्यभाग समेत हप्तौंसम्म बन्द भयो । पछि उक्त निर्णय फिर्ता लिइयो ।
हङकङमा धेरै मानिसले चीनले त्यहाँको राजनीतिमा अरु ढंगले पनि हस्तक्षेप गरिरहेको ठान्ने गरेका छन् । उनीहरुका भनाइमा हङकङको उदारवादी राजनीतिक परम्परालाई बेइजिङले नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।
त्यही भएर निम्न विषयहरुमा हंगकंग तीव्र रुपमा विभाजित भइरहेको छः
एउटा बेइजिङ समर्थक अभियानले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई हङकङमा थप राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
एउटा प्रजातन्त्रवादी समूहले चाहिँ हंगकंगको स्वायत्ता र विशिष्ट परिचयलाई थप बलियो बनाइनुपर्ने अडान राखिरहेको छ।
हङकङ हस्तान्तरणको वर्षगाँठमा राजनीतिक रुपमा विभाजित रहेका दुवै समूहले ठूला-ठूला प्रदर्शनहरु आयोजना गरिरहेका छन्।
सन् २०४७ पछि के हुन्छ ?
उक्त मितिपछि चीनले ब्रिटेनसँग हस्तान्तरणका बेलामा भएका सहमति अनुसार हंगकंगलाई स्वायत्ता दिइरहन बाध्यकारी हुनेछैन।
कतिपयले हंगकंगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् तर चीनले त्यसको सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारिसकेको छ।
त्यही भएर सम्भावित मार्गचित्र यस्तो हुन सक्छस्
चीनले अहिलेको स्वायत्ता र शहरको आधारभुत कानुनलाई थप विस्तार गर्ने
चीनले अहिलेका केही विशेष सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर सबै होइन
हङकङले आफ्नो विशेष क्षेत्रको अधिकार गुमाउने र स्वायत्ता बिनाको एउटा साधारण चिनियाँ प्रान्तको हैसियत प्राप्त गर्ने
हङकङमा राजनीतितर्फ आकर्षित युवापुस्ताको संख्या बढ्दै जाँदा धेरै पर्यवेक्षकले उक्त शहरमा भविष्यका बारेमा कठिन राजनीतिक संघर्ष हुने लख काटिरहेका छन् । बीबीसी
असार २४ गते, २०७४ - ११:४९ मा प्रकाशित
दिल्लीबाट १६ दिनपछि फर्किए महन्थ ठाकुर
काठमाडाैं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर १६ दिन लामो बसाईंपछि...
अलपत्र परेका ३० नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । मलेसियाको पेकेनेनास घरफिर्ती केन्द्रमा अलपत्र परेका ३० नेपालीको उद्धार भएको छ । घर फर्कने...
सबैलाई सन्तुलन हुने बजेट आउँछ: अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । मधेशी, दलित, जनजाति, व्यापारी, कृषक, पेशाकर्मीलगायत सबैलाई सन्तुलन हुने किसिमको नयाँ बजेट...
काठमाडौं । शेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । लगातार घट्दै आएको बजार आज २९.२५ अंकले ओरालो लागेर...
बुटवलका नेता लेखनाथ न्याैपानेलार्इ माअोवादीले गर्यो कारबाहि
बुटवल । ‘गुण्डानाइके’ मनोज पुनलाई सहयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका नेताद्वय लेखनाथ न्यौपाने र तुल्सी...
कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि ठगी मुद्दामा यसरी समातिए
लमजुङ । वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दामा अदालतले कैद सजाय र जरिवाना तोकी फरार सूचीमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई...
आफ्नै सरकारबिरुद्ध क्रान्तिकारीको प्रर्दशनः बेपत्ता नेता पौडेललाई सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले राज्यद्धारा वेपत्ता पारिएका आफ्ना तत्कालिन महासचिव...
अनुमान फेल खाएपछि डाक्टरले नै बच्चाको लिङ्ग काटिदिएपछि…
भारत । दुईजना ‘झोलाछाप डाक्टर’ले आफ्नो अनुमान फेल खाएपछि एउटा क्रुर घटना गराएका छन् । भारतको झारखण्ड...
जहाँ विद्यार्थी भर्ना शून्य भएपछि विद्यालय बन्द भयो
पाल्पा । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–२ फोक्सिङकोटमा विद्यार्थी भर्ना शून्य भएपछि एक विद्यालय बन्द...
कर्णाली प्रदेशको बजेट एक अर्ब २ करोड ५ लाख (पूर्णपाठसहित)
सुर्खेत । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तेस्रो चौमासिक बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।...
राजदूतबाट विद्यालय भवन उद्घाटन
प्रदेश ५ को प्रदेशसभा बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने
दुई कोरियाको शिखर बैठकः फेरीपनि पटक पटक भेट्ने प्रतिबद्धता
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घरमा विस्फोट गराउने विप्लव ५ कार्यकर्ता पक्राउ
मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न, के–के भयो निर्णय ?
एमाले–माओवादी एकता नहुँदै एराप्रपा राष्ट्रवादी र नेपाली कांग्रेस हुने भए एक
सेल्फी खिचेर कर्णालीको समृद्धि संभव छैनः मुख्यमन्त्री शाही
भूकम्पबाट प्रभावित भवन निर्माणका लागि नयाँ ऐन कानून आवश्यकः मुख्यमन्त्री पौडेल
कर्मचारीलाई लालबाबुको निर्देशनः खटाएको ठाउँमा नजाने भए तुरुन्त घर जानू
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलार प्लान्टको शिलान्यास
नविना लामाको विवाह समारोहमा नातिका साथ पुगे प्रचण्ड
राणाले बोलाए राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को बैठक
‘प्रचण्ड यस्ता नेता हुन्, जसले जमेको ताललाई समेत भुलभुल गराउन सक्छन्’